ယူနိုက်တက်အသင်းထံ ပြန်ချင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေကြားခဲ့တဲ့ ဇာဟာ - Sports Gabar
ယူနိုက်တက်အသင်းထံ ပြန်ချင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေကြားခဲ့တဲ့ ဇာဟာ
June 6, 2019 - by Lu Nyochaw
ခရစ်စတယ်ပဲလေ့အသင်းကစားသမား ဇာဟာက သူ့အနေနဲ့ အသင်းဟောင်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ပြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပံကစားသမားဇာဟာ ဟာမန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာရှိစဉ်က ပထမအသင်းကြီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် (၂)ပွဲအပါအ၀င် စုစုပေါင်း (၄)ပွဲသာ ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး စိတ်ပျက်စရာဘောလုံးရာသီကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးတဲ့သူပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃) ခုနှစ် တုန်းက ခရစ်စတယ်ပဲလေ့အသင်းကနေ မန်ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွေ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ အိုင်ဗရီကို့ ကစားသမားဟာ ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့အသင်းထံ အငှားပြန်လည်ချထားခံခဲ့ရပြီး၊ ကာဒစ်စီးတီး အသင်းအထိပါ ရောက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ ဇာဟာ အနေနဲ့ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့အသင်းထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အသင်းအတွက် ဒီရာသီမှာ (၁၀)ဂိုးသွင်းကာ၊ (၁၀)ကြိမ်ဂိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့တာဆိုရင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက သူ့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်လာတဲ့အထိပါပဲ။
ဒါကြောင့် ပဲလေ့အသင်းကလည်း ဇာဟာအတွက် ပေါင်သန်း (၈၀)သတ်မှတ်ထားပြီး သူ့ကို ခေါ်ယူစဉ်ကတန်ဖိုးထက် ပေါင်သန်း(၇၀)အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းထံ ပြန်ချင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဇာဟာက-
” အိုး! တကယ်ကြီးလား? ကျွန်တော်အနေနဲ့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပြီးပါပြီ၊ အခုအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေနေပြီလေ…”
” ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်လက်ထက်က ကျွန်တော် ယူနိုက်တက်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်၊ သူ့အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်နည်းပြအဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့လည်း ထင်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ အသင်းကို ဒေးဗစ်မိုရက် ရောက်လာခဲ့တယ်၊ သူက လူငယ်ကစားသမားတွေထက် ၀ါရင့်ကစားသမားတွေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့တယ်…”
” တစ်ချို့ပွဲတွေဆိုရင် ကျွန်တော် အရံခုံမှာတောင် မထိုင်ခဲ့ရပါဘူး၊ ဒါဟာတော်တော် ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ နည်းပြက ကျွန်တော့်ကို မယုံကြည်ခဲ့ဘူး…” လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျအသငျးထံ ပွနျခငျြလားဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဖွကွေားခဲ့တဲ့ ဇာဟာ
ခရဈစတယျပဲလအေ့သငျးကစားသမား ဇာဟာက သူ့အနနေဲ့ အသငျးဟောငျး မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကို ပွနျသှားဖို့ ဆုံးဖွတျရခကျနတေယျလို့ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။တောငျပံကစားသမားဇာဟာ ဟာမနျယူနိုကျတကျအသငျးမှာရှိစဉျက ပထမအသငျးကွီးမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ (၂)ပှဲအပါအဝငျ စုစုပေါငျး (၄)ပှဲသာ ကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး စိတျပကျြစရာဘောလုံးရာသီကို ဖွတျသနျးခဲ့ရဖူးတဲ့သူပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃) ခုနှဈ တုနျးက ခရဈစတယျပဲလအေ့သငျးကနေ မနျယူနိုကျတကျကို ပွောငျးရှရေ့ောကျရှိလာခဲ့တဲ့ အိုငျဗရီကို့ ကစားသမားဟာ ရောကျပွီးမကွာခငျမှာပဲ ခရဈစတယျပဲလအေ့သငျးထံ အငှားပွနျလညျခထြားခံခဲ့ရပွီး၊ ကာဒဈစီးတီး အသငျးအထိပါ ရောကျသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ဇာဟာ အနနေဲ့ ခရဈစတယျပဲလအေ့သငျးထံ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပွီးနောကျ ခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့ပွီး၊ အသငျးအတှကျ ဒီရာသီမှာ (၁၀)ဂိုးသှငျးကာ၊ (၁၀)ကွိမျဂိုးဖနျတီးပေးထားနိုငျခဲ့တာဆိုရငျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက သူ့ကိုပွနျလညျချေါယူဖို့ စီစဉျလာတဲ့အထိပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ ပဲလအေ့သငျးကလညျး ဇာဟာအတှကျ ပေါငျသနျး (၈၀)သတျမှတျထားပွီး သူ့ကို ချေါယူစဉျကတနျဖိုးထကျ ပေါငျသနျး(၇၀)အထိ တိုးမွှငျ့သတျမှတျထားပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးထံ ပွနျခငျြသလားဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဇာဟာက-
” အိုး! တကယျကွီးလား? ကြှနျတျောအနနေဲ့ တျောတျောဆိုးတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ကွုံခဲ့ရပွီးပါပွီ၊ အခုအခြိနျမှာတော့ အဆငျပွနေပွေီလေ…”
” ဆာအဲလကျဖာဂူဆနျလကျထကျက ကြှနျတျော ယူနိုကျတကျနဲ့ စာခြုပျခြုပျခဲ့တယျ၊ သူ့အနနေဲ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွအဖွဈဆကျရှိမယျလို့လညျး ထငျခဲ့တယျ၊ ပွီးတော့ အသငျးကို ဒေးဗဈမိုရကျ ရောကျလာခဲ့တယျ၊ သူက လူငယျကစားသမားတှထေကျ ဝါရငျ့ကစားသမားတှကေိုသာ အသုံးပွုခဲ့တယျ…”
” တဈခြို့ပှဲတှဆေိုရငျ ကြှနျတျော အရံခုံမှာတောငျ မထိုငျခဲ့ရပါဘူး၊ ဒါဟာတျောတျော ခကျခဲတဲ့အခွအေနဖွေဈခဲ့ပါတယျ၊ နညျးပွက ကြှနျတေျာ့ကို မယုံကွညျခဲ့ဘူး…” လို့ထုတျဖျောပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Previous Article စီးရီးအေဘက်မြှားဦးလှည့်လာပြန်တဲ့ ဘေးလ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့
Next Article ရီးရဲလ်မှာ လုကာဂျိုဗစ် အောင်မြင်မှု ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ရပ်